> Resource> Video> Olee otú iji tọghata PowerPoint ka AVI Video
Tọghata PowerPoint ka AVI video pụrụ ime ka ị a otutu uru. Ọ pụrụ inyere gị na-egwu slides on obere ngwaọrụ dị ka iPod, iPhone, HTC smartphones ma ọ bụ ịkọrọ PowerPoint vidiyo na YouTube, Facebook, ma ọ bụ gị blog na-egosipụta gị e kere eke ma ọ bụ kọwaa gị echiche. Ọ bụrụ na ị na-achọ usoro ihe omume nke na-akwado converting PowerPoint ka AVI, m n'aka na PPT2Video Pro bụ ezi nhọrọ. Ọ bụ ihe dị mfe na-eji na ọkachamara omume nke na-enyere gị iji tọghata PowerPoint dị iche iche na-ewu ewu video formats na mgbalị ọ bụla. Ebe a ka anyị hụ otú iji tọghata PowerPoint ka AVI Video na nke a software.
1 Wụnye PPT2Video Pro na Import PPT Files
Download na wụnye ikpe mbipute nke PPT2Video Pro mbụ wee pịa "Mepụta Video Files" ịbanye isi interface. Mgbe ahụ, pịa "Tinye" button bulite PPT faịlụ ka a PPT ka AVI Ntụgharị. Iji reorder na PPT faịlụ, ikpuru PPT faịlụ ma ọ bụ pịa "Bugharịa Up" ma ọ bụ "Bugharịa Down" button
2 Mee mmepụta Ntọala
Na "Mwube" interface, họrọ AVI dị ka mmepụta format na format dobe-ala ndepụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu lekwasịrị vidiyo na ngwaọrụ, ozugbo họrọ ngwaọrụ dị ka mmepụta usoro. Ndị a ndabere ntọala na-kachasị ugbua.
Nke a software-enye Advanced Ntọala nke ị nwere ike ime ka ojiji nke. Dị nnọọ pịa "Advanced Ntọala" n'ihi na profaịlụ, ọdịyo na video parameters na mmapụta Profaịlụ interface. Ebe a ị nwere ike ịtọ video àgwà na asụsụ, fanye ndabere image, họrọ video size ma tinye n'okirikiri na ụda olu-edekọ ihe. Ndị a niile nwere ike ime ka gị video ọzọ ndị ọkachamara.
3 Malite iji tọghata PPT ka AVI
Mgbe mwube mmepụta ọmụma, gaa na "Export" interface, setịpụrụ na-aga ma see "Malite" bọtịnụ rụchaa dum ọrụ ole na ole nke abụọ. Mgbe akakabarede a mere, pịa na-ele AVI faịlụ na kpọmkwem nchekwa. Mgbe ahụ ị pụrụ bulite video ka video nkekọrịta saịtị, ma ọ bụ na-egwu ya na TV ozugbo.
Olee otú Gbanyụọ Facebook Video Autoplay